दार्जिलिङका सांसद भेट्न दार्जिलिङका गोरामुमो नेता दिल्ली पुगेपछि... - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारदार्जिलिङका सांसद भेट्न दार्जिलिङका गोरामुमो नेता दिल्ली पुगेपछि…
दार्जिलिङका सांसद भेट्न दार्जिलिङका गोरामुमो नेता दिल्ली पुगेपछि…
November 7, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
विश्लेणात्मक समाचार : दार्जिलिङ,7नोभेम्बर
राजु विष्ट दार्जिलिङका सांसद हुन्, तर उनलाई भेट्न अब दार्जिलिङका नेताहरू दिल्ली कुद्न पर्ने स्थिति आइपरेको छ। गोरामुमो नेता मन घिसिङ सांसदलाई दार्जिलिङमा नभेटेपछि उनलाई भेट्न दिल्ली कुदेका छन्।
गोरामुमो सूत्रले बताएअनुसार दार्जिलिङका सांसद र नेता दुवैले दिल्लीमा बैठक गर्ने भएका छन्। गोरामुमोले भनेको छ, ‘मन घिसिङ राजु विष्टलाई ‘यसपालिको शीतकालीन सत्रमा स्थायी राजनीतिक सामाधानको आवाज उठाउनुस् है’ भन्न गएका हुन्।’
यतिभन्नलाई मन घिसिङ राजु विष्टसित बैठक बस्नुपर्ने हो कि पहाडका सबै दलका नेताहरू दिल्ली गएर राजु विष्टमा चाप सृष्टि गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न मन घिसिङले उप्जाएका छन्।
राजु विष्टले अघिबाट नै भाजपाले तोकेको दुइ बुँदे प्रतिबद्धता ( 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा र राजनीतिक स्थायी सामाधान)को लागि एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाउने भइसकेका हुन्। तर अहिलेसम्म यो कमिटीको ‘क’-समेत गठन गरिएको छैन।
वास्तवमा राजु विष्टलाई राजु विष्टले नै बनाउने स्टेयरिङ कमिटीले यसपालिको शीतकालीन सत्रमा मुद्दा छिनिफाना गर्न दवाब दिनुपर्ने हो। तर विष्टले बनाएको कमिटीले विष्टलाई नै दवाब दिन सक्ला त? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यसअघि दुइ मुद्दाको लागि पहाडका दलहरूमा एकता देखापरेको थियो तर अहिले दलहरू एक्लाएक्लै बोल्न थालेको छ। भर्खरै क्रामाकपाले स्टेयरिङ कमिटी बनाउन दवाब दिँदै वयान सार्वजनिक गरेको छ। क्रामाकपाले त ‘भाजपा र राजु विष्टलाई त्यो स्थायी राजनैतिक सामाधानको नाम स्पष्ट पार र काम अघि बढाउ’समेत भनेको छ। तर भाजपा र राजु विष्ट दुवै कानमा तेल हालेर बसेका छन्।
यसबीच विमल खेमा गोजमुमो मध्यममार्गी बनेको छ। न यता बोल्ने, न उता बोल्ने। विनय खेमा मोर्चाले पनि राजु विष्टलाई दवाब दिने कुनै गतिविधि गरेको छैन।
शीतकालीन सत्रमा गोर्खाहरूको मुद्दालाई छिनाफाना गर्न राजु विष्टलाई दवाब दिन पहाडका दलहरू एकबद्ध देखिनुपर्ने हो तर उता मन घिसिङ दलबलसहित राजु विष्टलाई दिल्लीमा भेट्न कुदिरहेका छन्, यता क्रामाकपा पहाडमा नै प्रेस वयानमार्फत आफ्नो बोल्ने औपचारिकता पूरा गरिरहेको छ। गोर्खालिग त भाजपामा विलिन बनिसकेजस्तै देखा परेको छ। अरु दलहरूमा मौनता देखा परेको छ। यी घटनाहरूले के सङ्केत गरेको छ भने विस्तारै राजु विष्टले पहाडका दलहरूबाट विश्वसनीयता गुमाइरहेका छन्। कि त राजु विष्टले विस्तारै पहाडका दलहरुलाई लोप्पा खुवाइरहेका छन्। जनताको मनमा भने पहाडका दलहरू एक्लाएक्लै सांसद भेट्न दिल्ली कुद्ने कि सामुहिक दवाब बनाउने? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
एनआरसीको विरुद्धमा अमित शाहको जलाइयो पुतला
लहडबाजीमा वर्णविन्यासको शिष्ट परम्परा भत्काएकाले नेपाली भाषा अराजकताको सिकार हुनपुग्यो : शरच्चन्द्र वस्ती